ज्यान गुमाएका खेलाडी सालाको स्थानान्तरण शुल्कमा कार्डिफ र नान्तेसबीच किचलो
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग खेल्ने वेल्सको क्लब कार्डिफ सिटीले विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका खेलाडी इमिलियानो सालाको स्थानान्तरण फाइल प्रस्तुत गरेको छ । विस्तृतमा
आर्मीका कप्तानलाई कारवाही
रोनाल्डोले युभेन्ट्स छोड्न सक्ने !
सन्दीपलाई भोट गर्ने कि !
युरोपा लिगको सेमिफाइनल समिकरण पूरा, आर्सनलको प्रतिद्धन्द्धी भ्यालेन्सिया, चेल्सीको एइनट्रिच
मुम्बाई इन्डियन्ससँग दिल्ली क्यापिटल्स ४० रनले पराजित
आठौँ राष्ट्रिय खेलकूद : आजदेखि एथ्लेटिक्स शुरु
इंग्ल्याण्डद्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका पराजित
काठमाडौं । इंग्ल्याण्डले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई हराएको छ । बिहीबार राति सम्पन्न मैत्रिपूर्ण खेलमा इंग्ल्याण्ड ३–० गोलले विजयी भएको हो ।
जर्मनीले रसियालाई हरायो
काठमाडौं । बिहीबार राति सम्पन्न मैत्रिपूर्ण खेलमा जर्मनीले रसियालाई हराएको छ । जर्मनीले रसियालाई ३–० गोलले पराजित गरेको हो ।
क्लाउडियो रानीयरी फुलहामको प्रशिक्षकमा नियुक्त
काठमाडौं । लेस्टर सिटीले बर्खास्त गरेका प्रशिक्षक क्लाउडियो रानीयरीलाई प्रिमियर लिगको क्लब फुलहामले नियुक्त गरेको छ । प्रशिक्षक स्लाभिसा जोकानाभिचको फुलहामले लगातार खराब नतिजा निकालेपछि उनलाई बर्खास्त गर्दै क्लबले रानीयरीलाई नियुक्त गरेको हो ।
प्रायोजन रकमको हिसाव लुकाएपछि पीएसजीलाई च्याम्पियन्स लिगबाट निकाल्न सक्ने
एजेन्सी । फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)लाई यूरोपको प्रतिष्ठित लिग च्याम्पियन्स लिगको आयोजक युईएफले प्रतियोगिताबाटै निकाल्नसक्ने भएको छ ।
बक्सिङ खेलमा १३ वर्षीय बालकको मृत्यु भएपछि....
बैंकक । थाइल्यान्डमा भएको बक्सिङ खेलमा १३ वर्षीय बालकको मृत्यु भएपछि चौतर्फी बिरोध भएको छ । मुआए थाई मार्सल आर्ट भनिने पाशविक एवं निर्मम खेलमा बालबालिकाले खेल्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउन फेरि आवाज उठेको छ ।
तेक्वान्दाे संघकाे विवाद अन्त्य गर्न सात दिनकाे समयसीमा
काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले तेक्वान्दो सङ्घमा देखिएको विवाद तत्काल अन्त्य गरी अगाडि बढ्न सात दिनको समयसीमा दिएको छ ।
जालाटन इब्राहिमोबिकः ‘ फुटबलका सिंह जसले बेलोन डि‘ओर जितेनन्’
विश्वकै उत्कृष्ट स्टाइकर मध्येका एक स्टाइकर हुन् जालाटन इब्राहिमोबिक । सन् १९८१, अक्टोबर ३ मा जन्मिएका उनी हाल एल अमेरिकन मेजर सकर लिगमा खेल्छन् ।
ओलम्पिक छनोटको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली आज स्वदेश फर्कदै
काठमाडौं । ओलम्पिक महिला फुटबलको एशियाली छनोटको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली आज स्वदेश फर्कदै छ । नेपाली टोली आज मध्यान्ह् नेपाल आइपुग्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले जनाएको छ ।
सान्टियागो सोलारी सन् २०२१ सम्म रियल मड्रिडको प्रशिक्षक
एजेन्सी । रियल मड्रिडले अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक सान्टियागो सोलारीसँग सन् २०२१ सम्मको लागि सम्झौता गरेको छ । मंगलबार बसेको रियलको बोर्ड बैठकले सोलारीलाई सन् २०२१ को जुन ३० सम्म रहने गरि नियुक्ती दिएको हो ।